Meydadka 13 Askari Oo Laga Helay Wabiga Shabelle iyo Dhimashada Weerarkii Bariire oo 95 Askari Gaartay [Warbixin].
Sunday October 01, 2017 - 15:25:38 in Wararka by Super Admin
Saacadba saacadda ka dambeysa waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarkii weynaa ee laba maalin ka hor ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose Koonfurta dalka Soomaaliya.
Khasaaraha gaaray ciidamada dowlada Federaalka Soomaaliya ee Mareykanku tababaray ayaa sii caga cagaynaya 95 askari dhimasho ah, Meydadka tobaneeyo Askari ayaa shalay iyo maanta laga helay iyagoo dul sabeynaya biyaha wabiga Shabelle.
Maanta Barqadii ayaa 10 Meyd laga helay wabiga deegaanka Bariire halka 2 askari oo Meyd ah laga helay degmada Awdheegle ee isla gobolka Shabeelaha Hoose, dad beeralay ah ayaa deegaanka Daarusalaam ku arkay Meydka Askari katirsanaa ciidanka Bangaraafta oo ku garaarnaa Qori AK47 ah iyo Booshkiisa.
Goob joogayaal ku sugan degmada Awdheegle waxay sheegeen in Meydadka labada ah ee lahelay mid kamida uu madaxu go’naa waxaana loo malaynayaa in Yaxaas uu cunay intii uu dhax sabeynayay biyaha wabiga.
Ciidamo ku sugan Bariire ayaa iyana wabiga kasoo aruuriyay Meydadka 10 askari waxayna wadarta Meydadka maanta la helay ka dhigeysaa 13 askari, sidoo kale Meydadka 2 askari ayaa shalay gelinkii dambe laga helay dhul beereed ku dhow Bariire waxaana loo malaynayaa in iyagoo dhaawac ah ay halkaas ku baxsadeen kadibna dhiig baxa ugu dhinteen.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in dhimashada dagaalkii Bariire ay gaartay 95 , khasaaraha ugu daran waxaa geystay qaraxyo lala helay saldhig ku dhow Buundada deegaanka, tobaneeyo askari oo iyagoo dhaawac ah wabiga ku daatay ayaa ku haftay biyaha halka dhaawacyada qaar ay dhiig bax u dhinteen kadib markii ay wax gurmad ah ka waayeen saaxiibadood.
Xarakada Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda weerarkii Bariire ayaa tiri "weerarkaas wuxuu aargud u ahaa shacabkii ay Ciidanka Mareykanka iyo kuwa murtadiinta ay ku xasuuqeen duleedka Bariire".
Khasaarahan lixaadka leh ee ka dhashay weerarkii Bariire ayaysan illaa iyo hadda ka hadlin Madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka waxaana muuqata in Maleeshiyaadkan Mareykanku tababaray aysan u xisaabsaneyn maamulka Villa Somalia.
Qarax 5 Askari lagu dilay oo Ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha.